Myanmar Journal Download | Onairmm
ဒီစာအုပ်လေးကို Ebook ဖန်တီးပြီး ပေးပို့လှူဒါန်းသူကတော့ ညီငယ် khin zaw hein ပဲ ဖြစ်ပါသည်။
( စာအုပ်ရှာလိုလျှင် မာတိကာ http://is.gd/r2mSzF မှာရှာပါ။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 53 minutes agoView this post on Facebook ဖက်ရှင်အလှ နေ့စဉ်ဘ၀ (တင်မိုးလွင်)
မိန်းကလေးရော ယောက်ျားတွေအတွက်ပါ နေရာဒေသနဲ့ လိုက်ပြီး ၀တ်ရမယ့် ဖက်ရှင်ပုံစံမျိုးစုံကို ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်သည်
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 hour, 22 minutes agoView this post on Facebook 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ likesaphoto.Posted2hours, 29 minutes ago "ရပါတယ် ပြန်ကြိုးစားကြည့်ပါဦး။" on their own photo.Posted2hours, 33 minutes ago နက္ခတ္တရောင်ခြည်_2013Dec (51M)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted9hours, 38 minutes agoView this post on Facebook မေမေတို့ရဲ့စစ်ပွဲများ (လူထုစိန်ဝင်း)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 day,2hours agoView this post on Facebook ကိုယ်နှင့် ပစ္စည်းကို ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့် (ဦးကျော်ဇေယျ)
ဒီစာအုပ်ကတော့ မိမိကို သို့ မိမိပစ္စည်းဥစ္စာကို ရန်မူလာရင် မည်သို့ ခုခံပိုင်ခွင့်များကို ဥပဒေအရ ရရှိနိုင် မရှိနိုင် စသဖြင့်ရေးသားထားသောစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ လူတိုင်း ဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းဖြင့် မိမိတို့၏ ဘေးအန္တရယ်အား ဥပဒေအရ ကာကွယ်နိုင်မည့် အကျိုးများ ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 day,2hours agoView this post on Facebook "Data Safety နဲ့ပတ်သက်ရင်..." on their own status.Posted 1 day,2hours ago Mediafire  Hosting Premium  တစ်နှစ်စာ 200GB က ( 49.99 USD) မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ဆိုရင် ၄၈၀၀၀ နီးပါးလောက်ရှိပါတယ်။ စာအုပ်တွေ ကို မပျက်စေဘဲ တည်တံ့အောင် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရာတွင် လင့်ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ တိုက်ရိုက် ဒေါင်းနိုင်အောင်စသဖြင့် Premium မှာ အခွင့်ထူးများအနေဖြင့် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Onair ကစာအုပ်တွေအတွက် သီးသန့် သို့ တတ်နိုင်သမျှ လှူဒါန်းချင်တဲ့သူများ ရှိမယ်ဆိုရင်........
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ ၀ယ်သုံးချင်ပါတယ်.. free ထက်ပိုပြီးလည်း Safe ဖြစ်ပြီး Page အတွက်လည်း အမှန်တကယ် လိုအပ်သည့် အရာလည်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တတ်နိုင်သမျှ လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့် OnAir message မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း...Posted 1 day,2hours ago မိန်းကလေး တိမ်စိုင်တို.၏ဟန်းနီးမွန်း
Credit to burmeseclassic
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 day, 13 hours agoView this post on Facebook လယ်တွင်းသားစောချစ် သူ.ရေမြေမှာကိုယ့်မျက်နှာ
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 day, 13 hours agoView this post on Facebook တက္ကသိုလ်နေလင်းအောင် ဧကရာဇ်သားတော်ကိုကယ်တင်ခြင်း
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 day, 13 hours agoView this post on Facebook နတ်ရွာမိုး နတ်ဖက်ဖူးစာဖက်နတ်ဖွက်ခံရခြင်း
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 day, 13 hours agoView this post on Facebook သတ္တိရှိတဲ့ မြက်ပင်များ (ဦးဘုန်း-ဓါတု)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted2days,2hours agoView this post on Facebook စိတ်အညောင်းပြေPosted2days, 17 hours agoView this post on Facebook "ရပါတယ် ကြိုးစားကြည့်ပါဦး။" on their own status.Posted2days, 18 hours ago Fan ညီလေးတစ်ယောက် ကမားကတ်တင်းစာအုပ်လို့မေးထားတဲ့အတွက်
မာတိကာ အမျိုးအစား (စီးပွားရေးဆိုင်ရာစာအုပ်များ) မှာသော်လည်းကောင်း မာတိကာ စာရေးသူအမည်
(လ) လင်းသိုက်ညွန့် (မြန်မာ့မြေ)
( စာအုပ်ရှာလိုလျှင် မာတိကာ http://is.gd/r2mSzF မှာရှာပါ။)Posted2days, 19 hours ago ဆိုးပေ (၃) (ဇ၀န)
(ဇ၀န စာအုပ်များအား မာတိကာ (ဇ) ဇ၀နတွင် ရှာနိုင်ပါသည်။)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted4days, 1 hour agoView this post on Facebook အတွင်းမီးလောင်ပေါက်ကွဲအင်ဂျင်များ (ICE)(ဦးအုန်းမြင့် - ဒီဇယ်)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted4days,2hours agoView this post on Facebook သောင်းဝေဦး အမှတ်တရတိုက်ပွဲများအမှတ်(၁၃)မဲသဝေါတိုက်ပွဲ
Credit to စာဖတ်ခန်း
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted4days, 14 hours agoView this post on Facebook ဒေါက်တာခင်မောင်ညွန့် ကျွန်တော်မစ္စတာဘားမား
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted4days, 14 hours agoView this post on Facebook ယောက်ျားတို့လောက ဟာသများ (စိန်ငှက်ရိုး)
ဘ၀အမောတွေ ပြေဖို့ မပြုံးပဲ ၀ါးလုံးကွဲ ရယ်ရမယ့် စာအုပ်လေးလည်း တစ်ပါးတည်း ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါကြောင်း
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted5days, 1 hour agoView this post on Facebook ခရီးသွားအင်္ဂလိပ်စကားပြော (သင်းသင်းနိုင်)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted5days, 1 hour agoView this post on Facebook အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘောလုံးဥပဒေနှင့် ဒိုင်လူကြီးများအတွက်လမ်းညွှန် (မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted5days, 1 hour agoView this post on Facebook ကျမ်းမာရေးဗေဒင် (ဒေါက်တာကံညွန့်)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted5days, 1 hour agoView this post on Facebook "တင်ပြီးသွားပါပြီ" on their own milestone.Posted5days,2hours ago မင်းမြတ်သူရ ရှိန်းဆာယာ
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted5days, 11 hours agoView this post on Facebook တြိစက္က မဟော်ဂနီလမ်း
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted5days, 11 hours agoView this post on Facebook လူထုဒေါ်အမာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစာအုပ်
Credit to အကြိုက်ဆုံး မြန်မာစာအုပ်များ
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted5days, 11 hours agoView this post on Facebook (U Aung Linn) Network အသုံးပြုနည်းလက်ဆွဲ
ဒေါင်းရန်  http://www.mediafire.com/view/4j5083586kv9g8t/(U%20Aung%20Linn)%20Network%20အသုံးပြုနည်းလက်ဆွဲ.pdfPosted5days, 19 hours agoView this post on Facebook လင်းယုန်မောင်မောင် တိုကျိုစစ်ခုံရုံးမှတ်တမ်း
Description: ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီး ဂျပန်တို့ စစ်ရှုံး၍ လက်နက်ချပြီးနောက် မဟာမိတ်တို့က ထိပ်တန်း ဂျပန်စစ်ဝါဒီများနှင့် စစ်ခေါင်းဆောင်များကို စစ်ခုံးရုံးဖွဲ့၍ စစ်ဆေးအပြစ်ပေးခဲ့သည်။ ထိုစစ်ခုံရုံးများတွင် ဂျပန်စစ်ဝါဒီများ၏ လူမဆန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို အထောက်အထား သက်သေများနှင့်တကွ ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး အပြစ်နှင့် လျော်ညီသည့် ပြစ်ဒဏ်အသီးသီးကိုလည်း ချမှတ်ခဲ့သည်။ ယခုစာအုပ်တွင် ထိုဂျပန်စစ်ဝါဒီများ၏ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုများဖြစ်ကြသည့် လူပေါင်းနှစ်သောင်းကျော် သတ်ဖြတ်မှု၊ စင်ကာပူတွင် တရုတ်အမျိုးသား ၃၀၀ ခန့်အား အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့မှု၊ နာမည်ကျော် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် သေမင်းတမန် မီးရထားလမ်းစီမံကိန်းအတွင်း စစ်သုံ့ပန်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှ ပေါ်တာဆွဲထားသည့် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများအား လူမဆန်စွာ ခိုင်းစေညှင်းပန်း နှိပ်စက်ခဲ့မှုများ၊ မဟာမိတ် စစ်သုံ့ပန်းများအား ထောင်သင်္ဘောများပေါ်တင်ကာ ပင်လယ်ခရီးတစ်လျှောက် မသေရုံကျွေးမွေး၍ တိရစ္ဆာန်များပမာ သိုလှောင်လာခဲ့ပြီး စိတ်တိုင်းမကျသည့်အခါ ရက်ရက်စက်စက် ရိုက်နှက်ကန်ကြောက်ခဲ့မှုများ၊ လူမဆန်အောင် လက်သံပြောင်ခဲ့သည့် ဂျပန် စစ်ကင်ပေတိုင်များ၏ ရာဇ၀တ်မှုများ၊ စစ်အတွင်း အသားအပါအ၀င် စားနပ်ရိက္ခာ ရှားပါမှုကြောင့် ဖမ်းဆီးထားသည့် မဟာမိတ်လေသူရဲကို သတ်၍ ဇာတ်တူ လူသားစားခဲ့ကြသည့် ဂျပန်စစ်ဗိုလ်များ၏ အော့နှလုံးနာဖွယ် ဖြစ်ရပ်မှန်များ (လူအသည်းကိုပါ အမြည်းအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်) အပါအ၀င် စစ်ပွဲအတွင်း ဂျပန်တို့ ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ရာဇ၀တ်မှုများအကြောင်းကို တရားရုံးမြင်ကွင်းများနှင့်အတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖတ်ရှုကြရမည်ဖြစ်သည်။
အောက်ပါလင့်မှာ ဒေါင်းပါရန် ။
Credit to စာဖတ်ခန်း
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 week agoView this post on Facebook ချစ်ဦးညို ကောသမ္ဗီ
Credit to မြန်မာဆိုက်ဘာမီဒီယာ
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 week agoView this post on Facebook မင်းသိင်္ခစာအုပ်များ (၆၀) အုပ်
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 week agoView this post on Facebook မင်းမြတ်သူရ၏စာအုပ်များ (၁၅)အုပ်
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 week agoView this post on Facebook ဗန်းမော်တင်အောင် ပြည်တော်သာခင်ခင်ဦး
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 week agoView this post on Facebook ထောင်မှူးကြီးသိန်းဝင်း မကောင်းထောင်ပို့
Credit to Free Myanmar Books Downloads
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 week agoView this post on Facebook တင်ထွန်း(တောင်ကုတ်) ဆက်ဒမ်၏ ဘဝနှင့် မလှသောနိဂုံး
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 week agoView this post on Facebook မြသန်းတင့် အတ္ထုပ္ပတ္တိ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Credit to Free Myanmar Books Download
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 week agoView this post on Facebook "ရပါတယ်။ စစ်ပြီးပါပြီ။..." on their own photo.Posted 1 week ago 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ likesapost.Posted 1 week ago မြန်မာ့လှို့ဝှက်ချက် (၁၀၀) နန္ဒမိုးကြယ် - (အောက်တွင် Download link ပါရှိပါသည်။)
ဆရာကြီးပီမိုးနင်း ဘယ်လိုကြောင့် ကွယ်လွန်ခဲ့ရသလဲ
ဆရာကြီးဦးလွန်း ဘာကြောင့်မစ္စတာမောင်မှိုင်း အမည်ရခဲ့သလဲ
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ ဘယ်လောက်ထိ ဆွမ်းဘုန်းပေးနိုင်သလဲ
စဉ့်ကူးမင်းခေါင်းလောင်းတော်ကြီးကို မြန်မာတွေ ဘယ်လိုဆယ်ယူခဲ့ရသလဲ
.... စသဖြင့် လှို့ဝှက် အကြောင်းအရာပေါင်း ဗဟုသုတပေါင်း ၁၀၀ ပါဝင်သောစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 week agoView this post on Facebook လျှပ်စစ်မော်တာ ပြုပြင်နည်းနှင့်ထိန်းသိမ်းမှောင်းနှင်နည်း (ဦးကိုကိုကြီး)
ဤစာအုပ်ကို မိတ်ဆွေ7starlight မှ Ebook ပြုလုပ်ပါသည်။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 week agoView this post on Facebook ဘာသာစကားဆိုင်ရာစာအုပ်များ (၃၀ အုပ် + ၁ ကွန်ပြူတာအဘိဓါန်)
မာတိကာ http://is.gd/r2mSzF  မှာလည်းရှာနိုင်ပါသည်။
(S)ကွန်ပြူတာသုံး I Dictionary (ဂျပန်၊ကိုရီယား၊ရုရှား၊ထိုင်း၊အင်္ဂလိပ်-ငါးဘာသာ အဘိဓါန်ဆော့ဖ်ဝဲ)
http://is.gd/nT7CN1Posted 1 week, 1 day agoView this post on Facebook "တကယ်တင်ချင်ပါတယ်....." on their own status.Posted 1 week,2days ago ရှေးရှေးတုန်းက ဂန္ဓရီ (အောင်အေး)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 week,3days agoView this post on Facebook ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်များအတွက်ရော သုတရသတွေအတွက်ရော Page အတွက်ရော Supporting လုပ်လိုတယ် ကူညီလှူဒါန်းလိုတယ်ဆိုလျှင်တော့ OnAir message မှ ဆက်သွယ်လို့ရပါသည်။
စာပေမြင့်ပြီး လူမျိုးတင့်ကြပါစေ။ လိုချင်တဲ့စာအုပ်များလည်း အခက်အခဲမရှိ ဖတ်နိုင်ကြပါစေ။Posted 1 week,3days ago ပညာတတ်တိုင်း ပညာရှိမဟုတ် (လူထုစိန်ဝင်း)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 week,3days agoView this post on Facebook "မာတိကာ အမျိုးအစား (ဗေဒင်..." on Zar Gyi's post on 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ's wall.Posted 1 week,3days ago (သိုးမွှေး ချည်) နှစ်ချောင်းထိုးနည်း (စိန်စိန်ဦး)
ကိုရီးယားစတိုင်လ် ဝေ့စကုတ်အင်္ကျီထိုးနည်း
လူငယ်စတိုင် ခေါင်းစွပ်ဆွယ်တာ လက်ရှည်ထိုးနည်း
စသည့် သိုးမွေး ချည်ထိုးနည်း ပညာရပ်ပေါင်း ၃၆ မျိုးပါဝင်ပါသည်။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 week,4days agoView this post on Facebook "Page မှာတင်လိုက်ပါပြီ" on their own photo.Posted 1 week,4days ago အောင်မြင်ရေးသော့ချက် A-Z 26 (ညီညီနိုင်)
ဤစာအုပ်အား မိတ်ဆွေ 7starlight မှ Ebook ပြုလုပ်ပါသည်။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 week,4days agoView this post on Facebook အခြေခံ တရုတ်စာလုံး ၄၀၀ စကားပြောနည်းနှင့် စာရေးနည်း (ဦးရည်စိန်)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 week,4days agoView this post on Facebook ဘ၀
တစ်ချို့နေရာတော့ မကျွံအောင် ရုန်းနိုင်လေရဲ့
အလင်းတစ်ပွင့်တော့ တစ်ခါတစ်ရံ ဖမ်းမိလေရဲ့
ဒီလိုနဲ့ တတိတိ သေဆုံးသွားရလေရဲ့
Ref: https://www.facebook.com/pages/%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8/164564110419290?ref=hlPosted 1 week,5days ago "မာတိကာ (က) ကျော်သူမှာ ရှာပါ။" on their own photo.Posted 1 week,5days ago အလှပုံရိုက်ချင်သူတွေအတွက် ပို့စ်ပေါင်း (၅၀၀) (For Women)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 week,6days agoView this post on Facebook စက္ကောမစာအုပ်များ အဟောင်း ၃ + အသစ် ၁ = ၄ အုပ်လုံးအား မာတိကာ (စ) စက္ကောမတွင် ရယူနိုင်ပါသည်။
လေ့လာပျော်စရာ မျက်လှည့်ပညာ (စက္ကောမ)
မိတ်ဆွေ7star light မှ Ebook ဖန်တီးပါသည်။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 week,6days agoView this post on Facebook တွေးပြီးမှပြောမယ် -Talk After Thoughts (ရွှေမင်းဝန် ဦးဘုန်းမြင့်)
အမှားနည်းတော့ .. စိတ်ချမ်းမြေ့မှုရှိမယ်။
မိတ်ဆွေ7star light မှ ebook ပြုလုပ်ပါသည်။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 week,6days agoView this post on Facebook လမင်းမိုမို ရင်နာစရာ
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 week,6days agoView this post on Facebook သိုးဆောင်း may we help you
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 week,6days agoView this post on Facebook ရှင်မိုး(ဆေးတက္ကသိုလ်) ဆုံဆည်းရမဲ့ဒီရင်ခွင်
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 week,6days agoView this post on Facebook ဆရာဝန်မသုံးယောက် (မောင်ပေါ်ထွန်း)
ဤစာအုပ်တွင် နာမည်ကျော်စာရေးဆရာကြီး ဆစ်ဒနီရှယ်ဒန် က ဆရာဝန်နှင့်သူနာပြု အပါအ၀င် အမှုထမ်းပေါင်း ကိုးထောင်ကျော်ရှိသည့် ခရိုင်ဆေးရုံကြီး တစ်ခုကို ကျောရိုးပြုကာ တစ်တိုက်ခန်းတည်းနေ
တစ်ဆေးရုံတည်းလုပ် ဆရာဝန်မသုံးဦးတို့အား အဓိက ဇာတ်ဆောင်ထားပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရှုပ်ထွေးသော ဆေးပညာအမှု ဇာတ်လမ်းကြီးတစ်ခုအဖြစ်ရေးဖွဲ့ထားသည်။
(တောင်းတဲ့လူများတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်လည်း ဖြစ်ပါသည်။)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted2weeks agoView this post on Facebook စက်နင်းတတ်ရင် စက်ချုပ်တတ်မယ် (စိန်စိန်ဦး)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted2weeks agoView this post on Facebook ညီမလေးရယ် ပြောပြမယ် (လင်းသိုက်ညွန့် (မြန်မာ့မြေ))
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော အစ်ကိုက ညီမလေးထံ ပေးစာပုံစံ စာပေ
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted2weeks agoView this post on Facebook "မာတိကာ (က) ကျော်ဝင်းမှာ ယူပါ။" on Win Maw's post on 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ's wall.Posted2weeks ago ဒို့မြန်မာ ဆိုတဲ့ http://group.doemyanmar.com/pages/214/page_0/
မြန်မာ Social Website မှာ OnAir တစ်ခု ထောင်ထားတာတွေ့ပါတယ်။ ဒီက စာအုပ်တွေ ပဲ တင်ထားပါတယ်။ ဘယ်သူမှန်းမသိပေမယ့် ပြောချင်တာကတော့ ကျေးဇူးပါ :)၊ Twitter မှာလည်း လုပ်ချင်တဲ့သူ ရှိရင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ Page အကျိုးရှိတဲ့ Page အနေနဲ့ ရပ်တည်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မှ လက်ခံပါကြောင်း..Posted2weeks ago ရသင့်တယ်လို့ထင်ရင် LikePosted2weeks agoView this post on Facebook တြိစက္က ဘူတာဝါဟာနမဟာမြိုင်
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted2weeks agoView this post on Facebook OnAir Fan ထဲမှာ REDLINK, ADSL နောက် တခြား ဟာတွေ လက်ရှိသုံးနေတဲ့သူရှိရင် အသေးစိတ်လေး ကူညီပေးကြပါဦး
အဓိက ADSL ကို အိမ်သုံးအတွက် လစဉ်ကြေး နှစ်စဉ်ကြေး နောက် ဆက်သွယ်ရေးမှာ လျှောက်ပုံလျှောက်နည်းလေးတွေ သိချင်ပါတယ်။ သိတဲ့သူများ OnAir ကြီးကို ကူညီပေးကြပါအုံး။ :)Posted2weeks ago လက်သည်းကိုဘယ်လိုအလှပြင်မယ် (ရူပါသိမ်း)
အလှအပဖက်ရှင် အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် လေ့လာဖို့အတွက် ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted2weeks, 1 day agoView this post on Facebook သင့်အတွက် အီဒီယမ်များ (ဦးအဂ္ဂ)
မိတ်ဆွေ 7*Light မှ Ebook ပြုလုပ်မျှဝေပါသည်။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted2weeks, 1 day agoView this post on Facebook စာအုပ်တွေ ရှာချင်ရင် မာတိကာမှာ ရှာပါ။ မာတိကာ လင့်အား စာအုပ်များတင်တိုင်း စာအုပ်များနှင့်အတူ တပါးတည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။Posted2weeks, 1 day ago ယခုအပတ်အတွင်း ထပ်မံလှူဒါန်းကြသည့် အလှူရှင်အချို့
Ko Nyan Win Maung - 5000 ကျပ်
Tony Htunaung - 7000 ကျပ်
Thein Than - ၇၈၅၀၀ ကျပ်
စာပေပရဟိတ အတွက် လစဉ်ကူညီလှူဒါန်းနိုင်သကဲ့သို့ သီးသန့်လည်း တတ်နိုင်သ၍ လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
OnAir message မှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။Posted2weeks, 1 day ago "ဘိုဘိုးအောင် - မာတိကာ (သ)သုတေသီ..." on Kan Zaw's post on 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ's wall.Posted2weeks, 1 day ago မဟူရာ(လွိုင်ကော်) ရွှေနံ.သာရွှေအဆင်း
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted2weeks, 1 day agoView this post on Facebook မောင်စိန်ဝင်း သူနမ်းလျှင်ပန်းပွင့်ဖြစ်သူပစ်တော့ဝါရွက်ကြွေ
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted2weeks, 1 day agoView this post on Facebook ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစာအုပ်များ (၃၃အုပ်)
မာတိကာ http://is.gd/r2mSzF အမျိုးအစား (ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာစာအုပ်များ)တွင်လည်း ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
(၁)ရာသီမလာခင် လူသတ်ချင်နှင့် ရွှေမင်းသမီးတို့ရဲ့ စပ်စပ်စုစုမေးခွန်းများ (ဒေါက်တာစိုးလွင်)
(၂)ဖဲမွေ့ယာပေါ်က ယောက်ျားမဟုတ်သောစက်ရုပ် (ဒေါက်တာစိုးလွင်)
(၃)ပညာသားပါပါအရက်သောက်သုံးနည်း (ကျော်သက်ခိုင် -ဆေးတက္ကသိုလ်)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)
(၄)သိပ္ပံနည်းကျ လက်တွေ့ဆေးလိပ်ဖြတ်နည်း (ကျော်သက်ခိုင် -ဆေးတက္ကသိုလ်)
(၉)ကလေးကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာ အယူအဆအမှားများ (ဒေါက်တာရဲမြင့်ကျော်)
(၁၁)မိခင်လောင်းတို့အရေး မေးချင်ရာမေး (ဒေါက်တာစိုးလွင်)
(၁၄) အိုဂျီဦးစိုးမြင့် ဘ၀မှတ်တမ်း (ဒေါက်တာကျော်မြင့်)
(၁၆)မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးနည်း ၁၄၉ မျိုး (နေ၀င်းလန်ဒန်)
(၁၈)ရင်သားကင်ဆာ သိကောင်းစရာများ (ပါမောက္ခမင်းဓာတု)
(၂၀)သွေးချို ဆီးချိုရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် မှန်ကန်သည့်စားသောက်နည်း (ဒေါက်တာလှကြည်)
(၂၁)ကင်ဆာရောဂါ၏ရေသောက်မြစ်များနှင့် အစွမ်းထက် သဘာဝဆေးပင်များ (ဗအုပ်ခိုင်)
(၂၂) မိုက်ကယ်ရယ် သော်တာဆွေရယ် လူနာတစ်ယောက်ရယ် ကျွန်တော်ရယ် နှင့် ဆေးလောကဇာတ်လမ်းများ
(၂၄)အပျိုဖော်ဝင်စ ဆယ်ကျော်သက်တွင် ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ (ရည်ရည်ဌေး)
(၂၅)ဒေါက်တာရဲမြင့်ကျော်စာအုပ်များ အသစ် (၁ အုပ်)
အဟောင်း ၁ + အသစ် ၁ = ၂ အုပ်လုံးအား မာတိကာ (ဒ) ဒေါက်တာရဲမြင့်ကျော်တွင် တစ်စုတစ်စည်းတည်း ရယူနိုင်သည်။
(၂၈)စောငုဝါ -ဆေးဖက်ဝင်ပျားမြီးရွက်နှင့် ဆေးဆောင်းပါးများ
(၂၉)ဆီးချိုရောဂါကျမ်းမာရေးစကားဝိုင်း နှင့်ရောဂါကုထုံး (ဒေါက်တာအေးကျော် နှင့် တိုင်းရင်းသမားတော် ဦးစည်သူ) (မြေလတ်မောင်မြင့်သူ)
(၃၀)သွေးဆုံးချိန်ခါ သိကောင်းစရာ (အတ္တကျော်)
Google Document ဒေါင်းလုပ်သည် ၀ဘ်ဆိုက်၏ဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံးရှိ Fileကိုနှိပ် Download ကို နှိပ်၍ စာအုပ်များကို ဒေါင်းလုပ်ရယူပါ။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted2weeks, 1 day agoView this post on Facebook Engine Knowledges For Fresher
ဤစာအုပ်လေးကိုလည်း မိတ်ဆွေ 7*Light မှ Ebook ပြုလုပ်ပါသည်။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။Posted2weeks, 1 day agoView this post on Facebook Efficient Deck Hand (DMA)
ဤစာအုပ်လေးကိုတော့ မိတ်ဆွေ 7*Light မှ Ebook ဖန်တီးပြီး Cbox မှတဆင့်ပေးပို့သည်။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted2weeks, 1 day agoView this post on Facebook N0-1 MILLIOANIRE MIND (အရှင်ဣဒ္ဓိပါလ)( စ/ဆုံး)
စာမျက်နှာ ၁၀၀၀ ခန့်ရှိသည့်အတွက် အပိုင်း ၄ ပိုင်းခွဲတင်လိုက်ပါသည်။
PDF part4(final)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted2weeks,2days agoView this post on Facebook တြိသင်္ခ ဣတ္ထိယစည်း
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted2weeks,2days agoView this post on Facebook တြိစက္က တစ်ပွဲစားမှော်ဝိညာဉ်
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted2weeks,2days agoView this post on Facebook တက္ကသိုလ်နေလင်းအောင်
Credit to mmcybermedia
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted2weeks,2days agoView this post on Facebook နတ်ရွာမိုး ဒါရိုက်တာချာတူးလန်
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted2weeks,2days agoView this post on Facebook ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် စာတစ်စောင် စာအုပ် က်ို pdf အနေဖြင့် Internet ပေါ်တွင်ဘယ်သူများလုပ်ထားပြီးလဲလိုက်ရှာကြည့်ရာမတင်ရသေးကြောင်းတွေ့ရပါသည်။သို့သော်ဒီစာအုပ်၏ အချို့ စာများကိုပြန်လည်စာရိုက်တင်ထားသည့်ဆိုဒ်များကိုတွေ့ရသဖြင့်လ်ိုက်လံစုစည်းကာ ကျန်ရှိလိုအပ်နေသော စာမျက်နှာများအားစကင်ဆွဲကာ စာအုပ် ဖြစ်မြောက်ရန်အားထုတ်ထားပါသည်။ ကျွန်တော် တို့ဖတ်သင့်သောစာအုပ်များအနက်ဤစာအုပ်လည်းအပါအ၀င်ဖြစ်ကြောင်းယူဆမိပါသည်။စာဖတ်ပျင်းသူများအနေဖြင့်အခြားစာအုပ်များမဖတ်ချင်နေပါ သည်စာအုပ်လေးကိုတော့ဖြင့် ဖတ်ကြည့်ပါရန်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ မူပိုင်ခွင့်ကိုအလေးမထားခြင်းမဟုတ်မူဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားလူအများတို့ သိစေလိုသောစေတနာဖြင့် အချိန်များစွာ အကုန်ခံ၍ E Book အဖြစ်ပြုလုပ်ပါသည်။
အထက်ပါစာမှာယခုစာအုပ်အတွက် ကိုအေးချမ်းနေခ ပေးပို့သည့်စာကို အနည်းငယ်မျှ စီစဉ်၍ပြန်တင်ပေးခြင်းပါ ခင်ဗျာ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် စာတစ်စောင် - မသီတာ(စမ်းချောင်း )
Credit to မြန်မာ စာအုပ်များ
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted2weeks,3days agoView this post on Facebook အိမ်ခြံဝင်းဟင်းခင်းပဒေသာ (မင်းဝင်းထိန် - B.Ag)
ဤစာအုပ်အား ညီငယ် Khin Zaw Hein မှ Ebook ပြုလုပ်၍ ပေးပို့ပါသည်။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted2weeks,3days agoView this post on Facebook 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ likesalink.Posted2weeks,3days ago 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ sharedalink.MediaFire isasimple to use free service for that lets you put all your photos, documents, music, and video inasingle place so you can access them anywhere and share them everywhere.Posted2weeks,4days agoမြသန်းတင့် ရှားလော့ဟုန်း၏နောက်ဆုံးဦးညွှတ်ခြင်း.pdfView this post on Facebook မြသန်းတင့် မက္ကဇင်းဂေါ်ကီ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted2weeks,4days agoView this post on Facebook မြသန်းတင့် ရှားလော့ဟုန်း၏နောက်ဆုံးဦးညွှတ်ခြင်း
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted2weeks,4days agoView this post on Facebook သည်းထိတ်ရင်ဖို ၂၀၁၃ နိုဝင်ဘာ
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted2weeks,4days agoView this post on Facebook စစ်ကိုင်းဦးဘိုးသင်း - စလေမင်းခွေး
ကျွန်ဘဝကနေ ကြိုးစားရင်း ဘုရင် အဖြစ်ကို ရောက်သွားတဲ့ စလေမင်းခွေး အကြောင်းကို ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ် တစ်အုပ်ပါ။ ဇာတ်လမ်းကြောင်းထဲ နီတိသဘောတရားလေးတွေ ဖြည့်စွက်ပြီး နောင်လာနောင်သားတွေ အတုယူသင့်တာယူဖို့ အမြော်အမြင် ကြီးနိုင်စေဖို့ ဆရာကြီးဦးဘိုးသင်းရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု တစ်ရပ်လို့လဲ ဆိုချင်ပါတယ်။ တစ်ခေတ် တစ်ခါက စလေမင်းခွေးစာအုပ်ဟာ ကျောင်းသုံးစာအုပ်အဖြစ် ပြဌာန်းခြင်း ခံရတဲ့ စာအုပ်ပါ။ ဆရာကြီးရဲ့ စာပေလက်ရာတွေကို မပျောက်ပျက်စေချင်လို့ Ebook အဖြစ် ဖန်တီးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted2weeks,4days agoView this post on Facebook "Yup, Local - banking..." on their own status.Posted2weeks,5days ago စာအုပ်ဆိုင်ရောက်တော့ အောက်ပါပညာရပ်စာအုပ်တွေ onair elibrary ကို ထည့်မံ ဖြည့်ပေးမယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ တစ်တပ်တစ်အား ထည့်ဝင်လိုသူများရှိလျှင် message မှဆက်သွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို တတ်နိုင်သရွေ့လှူဒါန်းနိုင်သလို လစဉ် ထည့်ဝင်လိုလျှင်လည်း ရပါသည်။
(ယခင်တုန်းကလည်း အလှူရှင်များအကူအညီဖြင့် ထိုကဲ့သို့ စာရင်းပြုလုပ်ထားသောစာအုပ်များအား တင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။)
စက်နင်းတတ်ရင် စက်ချုပ်တတ်မယ် - ၃၅၀၀ ကျပ်
ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်း ပုံကြမ်းရေးဆွဲနည်း (Fashion Design Illustration) (၁၈၀၀၀ ကျပ်)
ဆရာဝန်ဖြစ်ရကျိုးနပ်ပြီနှင့် ဆေးလောကဇာတ်ခုံပေါ်က လူနာမျိုးစုံ ဇာတ်လမ်းအဖုံဖုံ(ဒေါက်တာစိုးလွင်) ကျပ် ၄၀၀၀ ကျော်
ဆေးကုရမှာ ကြောက်တဲ့ ဆရာဝန်နှင့် ဆေးလောက ဇာတ်ခုံထက်က သံသယမုန်တိုင်း ကျပ် ၆၀၀၀ ကျော် (ဒေါက်တာစိုးလွင်
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အမေးနှင့် အဖြေ ၁၀၀၀   ကျပ်၄၀၀၀ ကျော် (4.25 USD_)
Automobile Owner's Digest ကားပိုင်ရှင်လက်စွဲ ကျပ်၈၀၀၀ ကျော် (8.75USD)
Mechanical အင်ဂျင်နီယာ Hand Book  ၃၅၀၀ ကျပ်
လယ်ယာမြေဥပဒေ  ( unknow price)
ဆံပင်အလှ ထုံးဖွဲ့နည်းများ (ကျပ် ၆၀၀၀ ကျော်)
ခင်မောင်ထွေး (ပျဉ်းမနား) ကျပ် ၄၀၀၀ ကျော်
ချက်စ် ထိုးနည်း ၄၀၀၀ ကျော်
GOLF ဂေါက်သီးအားကစား ၄၀၀၀ ကျော်
ခြင်းလုံးကစားနည်း (unknow price)
(တစ်တပ်တအား ပညာရပ်ဆိုင်ရာတွေအတွက် ပရဟိတ ပါဝင်လိုလျှင် OnAir page အပေါ် ညာဘက်ရှိ Message ဆိုတာကို နှိပ်ပြီးဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။)Posted2weeks,6days ago အချစ်ဘ၀ဒသနများ (ကောင်းသန့်)
ဘ၀တိုတိုလေးမှာ မေတ္တာချိုချိုလေးတွေ ချစ်တဲ့သူကိုပေးကြရအောင်
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted3weeks agoView this post on Facebook သားအတွက် စကားလက်ဆောင် (ကောင်းသန့်)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted3weeks agoView this post on Facebook "မာတိကာ (သ) သုခ မှာယူပါ" on Matthew Tan's post on 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ's wall.Posted3weeks ago မောင်ကြည်သန်. ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများမှခေါင်းဆောင်လောင်းများသို.
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted3weeks agoView this post on Facebook ရာဇဂဏီ မတစ်လုံးဝတစ်လုံးဘိုးသူတော်
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted3weeks agoView this post on Facebook အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာစာအုပ်များ (၁၁ အုပ်)
(ကျွန်တော်တို့ လက်ထွက် ၉ အုပ်နဲ့ Fan တွေကူညီတာ နဲ့ ပေါင်းထားပါတယ်။ )
(၁)ဒီဇယ်အင်ဂျင် (ဦးအုန်းမြင့် (စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ-စွမ်းအား))
(၂)အေစီ မှ ဒီစီသို့ နှင့် ဒီစီမှ အေစီသို့ (ဦးအုန်းမြိုင်-[လျှပ်စစ်])
(၄)Learning Autocad 2010 (အောင်ဇော်လတ်)
အထက်ပါစာအုပ်များနှင့် တွဲလေ့လာရန် Work File
(၇)ခေတ်မီမော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်နည်းပညာများ (မင်းသိန်း-စက်မှု)
(၉)လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာလက်စွဲ လုပ်ငန်းခွင်သုံးလက်တွေ့ပြစ်ချက်ရှာဖွေနည်းများ (ဦးကိုကိုလေး)
http://www.mediafire.com/download/kh3jwkxbm88ziyd/building_engineering.pdfPosted3weeks, 1 day ago ညီညီနိုင်စာအုပ်များ (၂ အုပ်)
(၁)စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်များ  (ညီညီနိုင်)
စီးပွားရေး လုပ်နေတဲ့သူတွေ လုပ်မယ်လို့ စဉ်းစားထားတဲ့သူတွေ ဒေါင်းဖြစ်အောင် ဒေါင်းသွားကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ နည်းလမ်းတွေ တော်တော်လေးကောင်းလွန်းပါတယ်။ ဥပမာ- မိမိဖောက်သည် စိတ်ဆိုးသွားရင် အလျှင်အမြန် စိတ်ဆိုးပြေစေမည့် အချက် ၇ ချက် စသည်ဖြင့် စိတ်ဝင်စားစရာ နည်းလမ်းတွေပါရှိပါတယ်။
http://www.mediafire.com/download/1jws2l082szgmvy/26%20Keys%20to%20Winning%20(NyiNyiNaing).pdfPosted3weeks, 1 day agoView this post on Facebook ကျွန်တော်တို့  အခု စာအုပ်အတွက် Page အတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ လှူလိုသူတွေအတွက် ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ အခု အသုံးပြုတဲ့သူတချို့ က လည်း လစဉ် Fan လေးလုပ်ထားရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ပြောပါတယ် နိုင်သ၍ စာပေပရဟိတ ပေါ့ အကျိုးကလည်း မကုန်ခန်းနိုင်အောင် များလှပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လစဉ် တတ်နိုင်သ၍ ထည့်ဝင်လိုသူများရှိလျှင်လည်း ပြောကြားနိုင်ပါတယ်။ လူအရေအတွက် အနည်းဆုံး လေး ငါး ဆယ်ဦး လောက်ရှိရင် တော့ Fan လေးတစ်ခု ပြုလုပ်သွားပါ့မယ်..
ယခုလောလောဆယ်တော့ နိုင်သ၍ လှူဒါန်းလိုသူရှိရင် message ကနေ ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း...Posted3weeks, 1 day ago ဆီမုဆိုးနှင့်အခြားဝတ္ထုတိုများ (ရဲမြတ်တင်)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted3weeks, 1 day agoView this post on Facebook "မာတိကာ (ဖ) ဖေမြင့်မှာ..." on သားရွှေ အိုး's post on 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ's wall.Posted3weeks, 1 day ago အထောက်တော်လှအောင် မပိုကြေးမလိုကြေး
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted3weeks, 1 day agoView this post on Facebook လယ်တွင်းသားစောချစ် ပြန်မလော့မြစ်မှနာဂစ်ပုံပြင်များ
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted3weeks, 1 day agoView this post on Facebook ပိုးကွန်ရက်နှင့် တူသောလက်များ (သိန်းဇော်-ရွှေလီ)
Credit - PPE e-libraryPosted3weeks,2days agoView this post on Facebook အမှတ်ထင်ထင် ကနီပုံရိပ်သွင်များ (ရွှေဟင်္သာ-မန္တလေးတက္ကသိုလ်)
Credit - PPE e-libraryPosted3weeks,2days agoView this post on Facebook ဂန္တဝင် ချစ်ကြည်စတမ်းနဲ့ လွမ်းရတဲ့မြို့သူ (ကိုယော-ဘောဂဗေဒ)
Credit - PPE e-libraryPosted3weeks,2days agoView this post on Facebook ဖန်လာပုံ ခုမှဆန်းကြယ် (သုသိဏ်)
Credit - PPE e-libraryPosted3weeks,2days agoView this post on Facebook သိကောင်းစရာ e-commerce (မောင်မောင်မြင်သိန်း-စက်မှုတက္ကသိုလ်)
Credit - PPT e-libraryPosted3weeks,2days agoView this post on Facebook မြန်မာစွယ်စုံကျမ်းအနှစ်ချုပ် ၂၀၁၂
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted3weeks,2days agoView this post on Facebook မောင်ရုပ်ဆိုးကိုချစ်ကြသည် (ရေနံ့သာမောင်ကျော်ညွန့်)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted3weeks,2days agoView this post on Facebook လယ်တီဒီပနီပေါင်းချုပ်-မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်(၃)ကျမ်းတွဲ (လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး)
Maung Ko Naing Maung မှပေးပို့ပါသည်။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted3weeks,2days agoView this post on Facebook "Xan Xuntor အမည် ဖြင့် message..." on their own status.Posted3weeks,2days ago ၁။စာအုပ်တွေ ရှာလိုလျှင် မာတိကာ မှာ ရှာနိုင်ပါတယ်။
၂။လက်မှုပညာ၊မော်တော်ယာဉ်၊စက်မှု၊ဆေးပညာ၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း၊ဘာသာစကားဆိုင်ရာများ အစရှိတဲ့ လိုအပ်တဲ့ပညာရပ်စာအုပ်တွေ အတွက်လည်းဆက်လက် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သဖြင့် လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့် Message မှတဆင့် အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။ (ဘဏ်အကောင့်ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သဖြင့် Comment များ ဖြင့်အဆင်မပြေတဲ့အတွက် OnAir Page message ဖြင့်သာဆက်သွယ်ပေးပါရန်)Posted3weeks,2days ago AMPGuideFreeIssue40
By YePosted3weeks,3days agoView this post on Facebook Pinya Magazine - No4July2013
By YePosted3weeks,3days agoView this post on Facebook Arts Magazine October Issue
By YePosted3weeks,3days agoView this post on Facebook နက္ခတ္တရောင်ခြည်_2013Nov
By YePosted3weeks,3days agoView this post on Facebook အဆောက်အအုံလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာလက်စွဲ
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted3weeks,4days agoView this post on Facebook N0-1 MILLIOANIRE MIND (ASHIN EIDDHI PALA)
တောင်းထားတဲ့သူတွေရော၊ ၀ယ်ဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေအတွက်ပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြင်ပမှာဝယ်ဖတ်လိုသူတို့အတွက် တန်ဖိုး နှစ်သောင်းငါးထောင်နဲ့ဝယ်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ PC နဲ့သာမက ဖုန်း တက်ဘလက်တွေနဲ့ပါ ဖတ်ရအဆင်ပြေပါလိမ့်မည်။
http://www.mediafire.com/download/9bw9n23c2nsdcym/No%201%20Millionaire%20Mind%20(part%204%20final).pdfPosted3weeks,4days agoView this post on Facebook "ရပါတယ် မာတိကာ..." on their own photo.Posted3weeks,4days ago မောင်ညိုမှိုင်း(သန်လျင်) ပြိတ္တာရေဆန်
Credit to Myanmar E-books
By YePosted3weeks,4days agoView this post on Facebook မောင်ညိုမှိုင်း(သန်လျင်) ဆင်မနင်းဘုန်းတော်ကြီး
By YePosted3weeks,4days agoView this post on Facebook မောင်ညိုမှိုင်း မိုးခေါင်ကျော်စွာ
By YePosted3weeks,4days agoView this post on Facebook ရာဇဂဏီ လူသူတော်သျှောင်တစောင်းနှင့်ကိုးသင်္ချိုင်းရာဇာ
By YePosted3weeks,4days agoView this post on Facebook ဥာဏ်စမ်းပဟေဠိပေါင်းချုပ် (ဆရာဝန်တင်ရွှေ)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted4weeks agoView this post on Facebook ကြက်၊၀က်၊ကျွဲ၊ နွား၊ ငုံး မွေးမြူရေးနှင့် ရောဂါကာကွယ်ကုသနည်းများ (သုတေသီဆရာငြိမ်း)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted4weeks agoView this post on Facebook "မာတိကာ (ခ) ခင်မျိုးချစ်မှာ ယူပါ။" on Pan Ei's post on 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ's wall.Posted4weeks ago ရူပါသိမ်း ဆယ်ကျော်သက်ကိုနားလည်ခြင်း
By YePosted4weeks agoView this post on Facebook တန်ဖိုးထားအပ်သောအရာများ (ဖေမြင့်) (2 MB)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။Posted4weeks, 1 day agoView this post on Facebook ဆေးကုန်သည် (မောင်မြင့်ကြွယ်) (8 MB)
ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ဇနီးသည် ပြင်းထန်သောရောဂါဝေဒနာကြောင့် မျှော်လင့်ချက်မရှိသော အခြေအနေမှ စမ်သပ်ဆဲ ဆေးဝါးတစ်ခုကို ဆေးကုန်သည်မိန်းကလေးတစ်ဦးမှ ရရှိလိုက်သော အခါတွင်.....
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။Posted4weeks, 1 day agoView this post on Facebook "Comming Tmw :)" on their own photo.Posted4weeks, 1 day ago တြိစက္က ဆယ့်နှစ်ကြိုးမှော်ရုံ
By YePosted 1 month agoView this post on Facebook မင်းမြတ်သူရ ဂျမဒါမင်းထင်နှင့်သေမင်းနာရီစင်
By YePosted 1 month agoView this post on Facebook 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ likesapost.Posted 1 month ago Online ပေါ်က OnAir စာကြည့်တိုက်လေးကို လှူဒါန်းကူညီကြသူများစာရင်း
လှူတဲ့သူတွေက OnAir နဲ့အတူ စာပေပရဟိတ လုပ်လိုခြင်း၊ စာအုပ်များအတွက်
လှူဒါန်းလိုခြင်း၊ OnAir ရေရှည်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေရန်လှူဒါန်းခြင်း၊ စာဖတ်သူများ
အတွက် စာပေအခက်အခဲများစွာကိုဖြေရှင်းပေးလိုခြင်း စတဲ့ရည်ရွယ်တွေနဲ့ကူညီကြပါတယ်။
Fan တစ်ယောက်ကဆိုလျှင် ဒီ Page လေးပျောက်ပျက်သွားမှာကို
တောင် စိုးရိမ်မိပါတယလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေ တတ်နိုင်သမျှ အရှည်တည်တန့်အောင် ပြုလုပ်
သွားမှာပါ။ စာပေအခက်အခဲရှိသူများအတွက်လည်း စေတနာ ရှေ့ထားပြီး ဆက်လက်ပြုလုပ်ပေးသွားပါမည်။
့ ယခုလအတွင် အလှူရှင်နှင့်လှူဒါန်းသူများစာရင်းပါ။
Nandar Soe Sein    100 AU$
Aung Ko Ko U           50 Euro
MA San San Aye   ကျပ်၂သိန်း
Fggsan Myint         ၁သိန်း ၅ သောင်း
မိတ်ဆွေတစ်ဦး           ၅ သောင်းကျပ်
Aung Ko U              ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေသည့် အင်္ဂလိပ်စာအုပ် အပါအ၀င် ၁၀၀၀၀ ကျပ်
Thet NaingHtun       မော်တော်ကားပြုပြင်နည်းစာအုပ်အတွက် ၁၀၀၀၀ ကျပ်
ဘ၀ဆက်တိုင်း ဥာဏ်ပညာမြင့်မားသူများဖြစ်ကြပါစေဟု စာဖတ်သူများကိုယ်စား ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။
စာပေအခက်အခဲကို မြူမှုန်မျှပင် မရှိစေချင်သည့် On Air
Donate လုပ်လိုလျှင် OnAir Page အပေါ် ညာဘက်ထောင့်ရှိ Message မှတဆင့်် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။Posted 1 month ago ကျွန်တော်သာ သမ္မတကြီးဖြစ်ခဲ့ရင် (ကျော်သူ)
Page မှာ တောင်းတဲ့သူတွေ ၊၀ယ်မရဘူးလို့ အော်ကြတဲ့သူတွေ (မြို့ကြီးပြကြီးတွေရဲ့ ဆိုင်တွေမှာတောင် အမှန်တကယ်လည်း ၀ယ်ရတာ ခက်ခဲပါတယ်) ပြည်ပမှာဝယ်မရတဲ့သူတွေ၊ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရောက်နေတဲ့ညီငယ်သင်္ဘောသီးတွေ၊ နယ်မှာဝယ်မရတဲ့သူတွေ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့သူတွေအတွက် ပို့ပေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Posted 1 month agoView this post on Facebook "comming evening :)" on their own status.Posted 1 month ago လင်းယုန်မောင်မောင် ကပ်စထရို
By YePosted 1 month agoView this post on Facebook ဥုံဖွ (စက္ကောမ)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 month agoView this post on Facebook Finally, i got it :)
ကဲ... ပြည်ပမှာဝယ်မရတဲ့သူတွေ၊ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရောက်နေတဲ့ညီငယ်သင်္ဘောသီးတွေ၊ နယ်မှာဝယ်မရတဲ့သူတွေ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့သူတွေအတွက် OnAir မှ  မနက်ဖြန် လေလှိုင်းပေါ်မှ ပို့ပေးသွားပါမည်။ (စာအုပ်က ထူတော့ Part လေးတွေခွဲပြီးတင်ပေးသွားပါမည်။)
စာပေအခက်အခဲအဆင်ပြေကြပါစေ။Posted 1 month agoView this post on Facebook ဥတ္တရနေလ ရတနာဂူနန်းရှင်တော်ဝင်သခင်မ
By YePosted 1 month agoView this post on Facebook တြိစက္ကတြိသင်္ခ တစ္ဆေဧည့်သည်နှင့်ဝထ္ထုတိုများ
By YePosted 1 month agoView this post on Facebook ဆေးတက္ကသိုလ်-မန္တလေး၂၀၁၂ နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်း
စာအုပ်အား ဆရာကြီးဦးသန်းဝင်း (Retired Rector UMM) မှပေးပို့ပါသည်။
( စာအုပ်ရှာလိုလျှင် မာတိကာ http://is.gd/r2mSzF မှာဖတ်ပါ။)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 month agoView this post on Facebook လင်းသိုက်ညွန့် (မြန်မာ့မြေ) စာအုပ်များ (၄အုပ်)
လင်းသိုက်ညွန့်စာအုပ်တွေကိုတောင်းထားလို့ တင်ထားသမျှကို ပြန်စုပေးလိုက်ပါတယ်။ မာတိကာ (လ) လင်းသိုက်ညွန့် (မြန်မာ့မြေ) မှာလည်း ရှာနိုင်ပါသည်။
(၁)လူငယ်မန်နေဂျာလက်စွဲ (လင်းသိုက်ညွန့် (မြန်မာ့မြေ))
(၂)ဘ၀အောင်မြင်ရေးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာရွေးချယ်မှု (လင်းသိုက်ညွန့် (မြန်မာ့မြေ))
(၃)တို့မြန်မာတွေ အာရှကျားဖြစ်စေဖို့ အပါအ၀င် ဗီတာမင်ဆောင်းပါးများ (လင်းသိုက်ညွန့် (မြန်မာ့မြေ))
(၄)အောင်မြင်မှုသို့လမ်းမများ (လင်းသိုက်ညွန့် (မြန်မာ့မြေ))
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 month agoView this post on Facebook Digital Fortress (Dan Brown)
ဤစာအုပ်အား Ko Kyaw Myint မှ ပေးပို့ပါသည်။
by XanPosted 1 month agoView this post on Facebook ပါမောက္ခဦးဖေမောင်တင် မြန်မာစာပေသမိုင်း
မြန်မာ့စာပေလောကမှာ အရှိန်အဝါ သြဇာ ကြီးမားတဲ့ စာအုပ် တစ်အုပ် ဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာစာပေကို လေ့လာ လိုက်စားသူများအတွက် မဖြစ်မနေ ဆောင်ထားရမယ့် စာအုပ်။ ကျမ်းကိုးကျမ်းကား ပြုဖို့အတွက် မဖြစ်မနေ ဆောင်ထားရမယ့် စာအုပ် ဖြစ်ပါကြောင်း ...။
By YePosted 1 month agoView this post on Facebook "ဆိုင်မှာ မှာထားပါတယ်။..." on Ko Ko Ysk's photo.Posted 1 month ago လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာလက်စွဲ လုပ်ငန်းခွင်သုံးလက်တွေ့ပြစ်ချက်ရှာဖွေနည်းများ (ဦးကိုကိုလေး)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 month agoView this post on Facebook တို့မြန်မာတွေ အာရှကျားဖြစ်စေဖို့ အပါအ၀င် ဗီတာမင်ဆောင်းပါးများ (လင်းသိုက်ညွန့် (မြန်မာ့မြေ))
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 month agoView this post on Facebook ဂြိုလ်တုစလောင်းတပ်ဆင်နည်းနှင့်ကျူးနစ်ကုတ်ဒ်နံပါတ်များ (ဦးသန်းဆင့်-နေလင်းအီလက်ထရွန်းနစ်)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 month agoView this post on Facebook ဖဲမွေ့ယာပေါ်က ယောက်ျားမဟုတ်သောစက်ရုပ် (ဒေါက်တာစိုးလွင်)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 month agoView this post on Facebook ၁။OnAir မူလ စာမျက်နှာ
(၅)Website နှင့် OnAir Andriod ဆော့ဖ်ဝဲများ
On Air Fan Page အား Andriod တွင်တိုက်ရိုက်ကြည့်ရန် Apk
စာအုပ်ရှာရန် OnAir မာတိကာ Apk
OnAir မှပြုလုပ်သည့် အင်တာနက်ကွန်ယက်မှ နောက်ဆုံးရသတင်းများ Website
ကျွန်တော်တို့ စာပေဝေမျှခြင်းဝါသနာအရ တည်ထောင်ထားသော OnAir ဟူသော Facebook Page စာကြည့်တိုက်လေးသို့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ စာပေအခက်အခဲရှိသူများအတွက် လှူဒါန်းမှုများတွင် ကူညီ လှူဒါန်းလိုလျှင် Page Message မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။စာပေအခက်အခဲအတွက် ပြုလုပ်၊စုစည်း၊မျှဝေသည်။Posted 1 month ago0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများView this post on Facebook အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေ့လာနည်းလမ်းညွှန် (အောင်ကိုဦး(UMK))
ဤစာအုပ်အား OnAir သို့ စာရေးသူမှ အလှူငွေနှင့်တကွ လှူဒါန်းပါသည်။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 month agoView this post on Facebook အလှအပဆရာဝန် (ကျော်သက်ခိုင်-ဆေးတက္ကသိုလ်)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 month agoView this post on Facebook ကျွန်တော်သာ သမ္မတကြီးဖြစ်ခဲ့ရင် (ကျော်သူ) စာအုပ်ကို တောင်းထားပါတယ်။
Nov 1 ရက်မှာ ထွက်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ အကယ်၍ အရမ်းဖတ်ရှုလိုတဲ့စာအုပ်လည်းဖြစ်တယ် နယ်ခြားပြည်ခြားရောက်နေတယ်၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အခက်အခက်ရှိနေတယ် ၊စာအုပ်လည်း ၀ယ်ရအဆင်မပြေဘူး ဆိုရင်တော့ တင်သွားပေးပါမည်။ ၀ယ်ရအဆင်ပြေသူတွေတော့ ၀ယ်ဖတ်ပေးကြပါလို့ပြောကြားလိုပါတယ်.. အောက်မှာ ကွန်မန့်လေးတွေ ရေးသွားပေးကြပါ။Posted 1 month, 1 week ago My Autobiography (Alex Ferguson)
ညီငယ် Htet Arkar မှ ပေးပို့ပါသည်။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook လှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် ဂမ္ဘီရနယ် (တိုးထက်)
ဘ၀ရှေ့ရေးကိုကြိုသိနေခဲ့သူ သမ္မတ အေဘရာဟင်လင်ကွန်း
ဆာအာသာကိုနင်ဒွိုင်း (ရှားလော့ဟုမ်းရေးသားသူ) နှင့် နာမ်လောက
စသည်တို့နှင့် လူဝင်စား သေရွာပြန် စသည့် ဆန်းကြယ်သောအဖြစ်အပျက်များစွာပါဝင်ပါသည်။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook သိပ္ပံနည်းကျ လက်တွေ့ဆေးလိပ်ဖြတ်နည်း (ကျော်သက်ခိုင် -ဆေးတက္ကသိုလ်)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook ကျော်သက်ခိုင် (ဆေးတက္ကသိုလ်) ၃ အုပ်
ပညာသားပါပါအရက်သောက်သုံးနည်း (ကျော်သက်ခိုင် -ဆေးတက္ကသိုလ်)
သိပ္ပံနည်းကျ လက်တွေ့ဆေးလိပ်ဖြတ်နည်း (ကျော်သက်ခိုင် -ဆေးတက္ကသိုလ်)
http://www.mediafire.com/download/1svpv46jnainlo8/kyawthetkhine_(ahlaapasayarwon).pdfPosted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook တက္ကသိုလ်ဘုန်းကြွယ် မျက်နှာစိမ်းဧည့်သည် ၁
တက္ကသိုလ်ဘုန်းကြွယ် မျက်နှာစိမ်းဧည့်သည် ၂ဇာတ်သိမ်း
By YePosted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook မင်းမြတ်သူရ အရိပ်
By YePosted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook ဂမ္ဘီရလောက_2013Oct
By YePosted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook မြင်ကွင်းစုံမှုခင်း ၂၇
By YePosted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook သည်းထိတ်ရင်ဖို_2013Oct
By YePosted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook "အဆင်ပြေရင်တင်ပေးပါမယ်..." on their own photo.Posted 1 month, 1 week ago OnAir စာကြည့်တိုက်သို့ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ လှူဒါန်းသူများအား စာဖတ်သူများကိုယ်စား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ (အလှူရှင်အမည်များလည်း Page တွင် ဖော်ပြပေးသွားပါမည်။)
လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့် Message ဖြင့် ဆက်သွယ်ပေးခြင်းဖြင့် ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်အား ထုတ်ပေးသွားပါမည်။ (Comment,Post များ ဖြင့်အကြောင်းပြန်ရာတွင် အခက်အခဲရှိသဖြင့် Message ဖြင့်သာဆက်သွယ်ပေးပါရန်။)
အားလုံးစာပေအခက်အခဲအဆင်ပြေကြပါစေ။Posted 1 month, 1 week ago နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ခေတ်ပေါ်မော်တော်ကားထိန်းသိမ်းနည်းလက်စွဲ (ဒိုဂျေဆန်း)
ဤစာအုပ်အတွက် သီးသန့် ညီငယ် Thet NaingTun မှ အလှူငွေပေးပို့လှူဒါန်းပါသည်။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook 10-Day MBA ဖြင့် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခြင်း(နေဇင်လတ်
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook ရာသီမလာခင် လူသတ်ချင်နှင့် ရွှေမင်းသမီးတို့ရဲ့ စပ်စပ်စုစုမေးခွန်းများ (ဒေါက်တာစိုးလွင်)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook အောင်မြင်မှုသို့လမ်းမများ (လင်းသိုက်ညွန့် (မြန်မာ့မြေ))
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook ဟိမ၀န္တာခရီးသည် (ချစ်ဦးညို)
ဒီစာအုပ်ကတော့ မဟာသေနာပတိ၊ နှင်းကေသရာချစ်တဲ့သူရဲကောင်း စတဲ့ စာအုပ်တွေလိုပါပဲ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့စာအုပ်ပါ။ ဇာတ်လိုက်ကတော့ ဇွဲ၊ လုံ့လ၊၀ိရိယအရှင် မဟာဇနက မင်းသားပဲဖြစ်ပါတယ်။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook နက္ခတ္တရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်း အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃
By YePosted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook မောင်ဝံသ သမ္မတကတော်၏ ဘ၀ခရီး
Credit to မြန်မာစာအုပ်များ
By YePosted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook လွတ်လပ်စွာ share နိုင်ပါသည်
စာအုပ်ကို ကူးခွင့်ပေးသော ဦးမျိုးမြင့် scaner လှူထားသော ကိုဇင်ဦးတို. ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်
ဒဂုန်ခင်ခင်လေး ရွှေစွန်ညိုနှင့်သားရွှေစွန်ညို 14.86MB
By YePosted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook "ဒုတိယတွဲ mediafire လင့်..." on their own photo.Posted 1 month, 1 week ago Spoken English For Seafarers (RO ကိုဆန်း)
ဒီစာအုပ်လေးကတော့ ညီငယ်တို့အတွက် များစွာ အထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။Posted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook စာအုပ်လှူချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ Message ဖြင့်သာဆက်သွယ်ပေးပါ။ Comment နှင့်ဆိုလျှင် ဘဏ်အကောင့် ထုတ်ပေးရတာအဆင်မပြေလို့ပါ။Posted 1 month, 1 week ago ခေတ်မီမော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်နည်းပညာများ (မင်းသိန်း-စက်မှု)
(Part2ရပါပြီ။)
( စာအုပ်ရှာလိုလျှင် မာတိကာ http://is.gd/hluLVT မှာရှာပါ။
by XanPosted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook ရာဇဂဏီ ၀ဏ္ဏသိဒ္ဓိရှင်
By YePosted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook တက္ကသိုလ်နေလင်းအောင် ကျောက်စိမ်းလိပ်ပြာ
ပတွဲ - http://www.mediafire.com/download/xm332uzroshmtu7
ဒု(ဇာတ်သိမ်း) - http://www.mediafire.com/download/won76601ommf8ua/
By YePosted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook မောင်ညိုမှိုင်း(သန်လျင်) ၀ဋ်ကြွေးမိုး အပါအ၀င် ဂမ္ဘီရ၀တ္ထုတိုများ
By YePosted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook အထောက်တော်လှအောင် အာရပ်အစ္စရေးလ်၆ရက်စစ်ပွဲ
By YePosted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook နတ်နွယ် တောအကြောင်းတောင်အကြောင်း ၂(မိမိနှင့် စာပေလှိုင်းဂယက်များ)
PDF _ ရာမညသူလေး
By YePosted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook နတ်နွယ် တောအကြောင်းတောင်အကြောင်း ၁(မိမိနှင့် စာရေးဆရာများ)
ဆရာနတ်နွယ်ရဲ့ တောအကြောင်းတောင်အကြောင်းများ စာအုပ်က ၃ တွဲ ရှိပါတယ်။ (၁) မိမိနှင့် စာရေးဆရာများ (၂) မိမိနှင့် စာပေလှိုင်းဂယက်များ (၃) မိမိနှင့် စာပေအရိပ်အယောင်ပုံရိပ်များ ဆိုပြီး အတွဲ ၃ တွဲပါ။
၃ တွဲလုံးကို စုပေါင်းပြီး စာအုပ် တစ်အုပ်ထဲ လုပ်ပေးမယ် ဆိုရင် စာမျက်နှာအရေအတွက် အရမ်းများသွားနိုင်တာ တစ်ကြောင်း၊ ဖိုင်ဆိုဒ်လဲ မဟားဒယား ကြီးသွားမှာ တစ်ကြောင်းမို့ တစ်အုပ်ချင်းစီပဲ ခွဲပြီး ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၂ တွဲလဲ သိပ်မကြာခင် ထွက်လာမှာပါ ခင်ဗျာ။
By YePosted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook ဗျူး ချစ်သူကိုခေါက်သိမ်းပြီးအိပ်ရာပေါ်တင်ခဲ့ရတဲ့ညနေ
By YePosted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook နတ်နွယ် သိဂီ င်္တစ်ဝက်ရွှေတစ်ဝက်
By YePosted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook ထိုင်းကလာတဲ့ အိမ်ဒီဇိုင်းစာအုပ်လေး (ပထမတွဲ ၁၂၀ ဒီဇိုင်း + ဒုတိယတွဲ ၁၂၀ ဒီဇိုင်း)
(ညီငယ်မျိုးကြီး စကင်ဖတ်ပြီးပို့ပေးတဲ့စာအုပ်လေးတွေပါ။ ပထမတွဲတင်လိုက်တာ Share 130 ကျော်ပြီး ၀ိုင်းဒေါင်းကြတာ Dropbox ကတောင် ဘမ်းလိုက်ပါတယ် ဒေါင်းကောင်းလွန်းလို့။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook စာအုပ်ဆိုင်မှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်လေးတွေနဲ့ တောင်းထားတဲ့ စာအုပ်လေးအချို့
ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေက Internet ပေါ်မှာ တော်တော်နည်းပါးပါတယ်။ ဈေးတွေကလည်း မြောက်လွန်းလှပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် တစ်အုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်အုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် တတ်နိုင်သလောက် မလှူချင်ကြဘူးလားဗျို့။ ကျွန်တော်တော့ လှူချင်လိုက်တာ ကိုယ်ချည်းပဲဆိုရင်တော့ ပဲပြုပ်နဲ့ပဲစားရမယ်ထင်တယ် :D၊ CNC စာအုပ်လေးတော့ မကြာခင် ထပ်မံ ပြုလုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။ အဲဒီ့စာအုပ်က အရင်ကတည်း တောင်းထားကြတာ ဈေးမြောက်လွန်းလို့ လုပ်မပေးနိုင်ဘူး အခုတော့ ကြိုးစားပေးသွားပါ့မယ်။ အားလုံးပဲ လှူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Page အပေါ် ညာဘက်ထောင့် Message ဆိုတာလေး နှိပ်ပြီး ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း :)
လူငယ်များသိဖို့ ယာဉ်များအကြောင်း (၃၅၀၀ ကျပ်)
နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ခေတ်ပေါ်မော်တော်ကား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းလက်စွဲ (၇၅၀၀ ကျပ်)
ချစ်သမီးများသို့ အဆင့်မြင့်အင်္ဂလိပ်စာ ရေးနည်း၊ ဖတ်နည်း သဒ္ဒါသစ် (၄၇၅၀ ကျပ်)
အခြေခံ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ (ဆရာမိုး) ၁၁၀၀၀ ကျပ်
အမေရိကန်တစ်ယောက်လို စီးပွားရေးသုံး အင်္ဂလိပ်စကားပြော (Speak Better Business English)  ၈၇၅၀ ကျပ်
ချစ်တတ်မှ ကလေးရနှင့် သားသမီးရတနာရစေကြောင်း နည်းလမ်းကောင်းများ (၁၄၀၀၀ ကျပ်)
CNC Machine အကြောင်း  ၅၀၀၀ ကျပ်
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အမေးနှင့် အဖြေ ၁၀၀၀  ၆၀၀၀ ကျပ်
ပလစ်စတစ်လုပ်ငန်းသုံး စက်မျိုးစုံ တည်ဆောက်နည်း အတတ်ပညာများ ၁၁၀၀၀ ကျပ်
ကောင်းမွန်သော ဆောက်လုပ်မှု နည်းစနစ်များနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော အင်ဂျင်နီယာများ ၇၀၀၀ ကျပ်
ကွန်ကရစ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အတတ်ပညာ ၄၅၀၀ ကျပ်
Air Compressors And Compressed Air Systems  ၁၁၀၀၀ ကျပ်Posted 1 month, 1 week ago ချုံကြားမှ ဘုံးဖျားသို့ (ဖေမြင့်)
ညီငယ် Khin Zaw Hein မှ Ebook ပြုလုပ်၍ ပေးပို့ပါသည်။
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook အတွေးအခေါ်တို့လွင့်မျောခြင်းနှင့် လူ၏ဆောက်တည်ရာ (နန္ဒာသိန်းဇံ)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 month, 1 week agoView this post on Facebook "မာတိကာ မှာ ရှာနိုင်ပါပြီ။" on their own milestone.Posted 1 month, 1 week ago ၁။OnAir မူလ စာမျက်နှာ
OnAir မှပြုလုပ်သည့် အင်တာနက်ကွန်ယက်မှ နောက်ဆုံးရသတင်းများ Apk (900 latest info apk)
900 Latest info Website
ကျွန်တော်တို့ စာပေဝေမျှခြင်းဝါသနာအရ တည်ထောင်ထားသော OnAir ဟူသော Facebook Page စာကြည့်တိုက်လေးသို့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ စာပေအခက်အခဲရှိသူများအတွက် လှူဒါန်းမှုများတွင် ကူညီ လှူဒါန်းလိုလျှင် Page Message မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။Posted 1 month,2weeks ago စာအုပ်များရှာဖွေနိုင်သည့် OnAir မာတိကာ အားလင့်အသစ်အနေဖြင့် ပြင်ဆင်ပြီးပါပြီ။
http://is.gd/r2mSzF သို့ ၀င်ရောက်ပါရန်။Posted 1 month,2weeks ago 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ updated their cover photo.Posted 1 month,2weeks agoView this post on Facebook ကုမ္ပဏီအင်တာဗျူး (မောင်မောင်မြင့်သိန်း)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 month,2weeks agoView this post on Facebook မင်းလေးကိုချစ်လို့ သီချင်းဆိုရင်း အသက်ရှင်မယ် (ကောင်းသန့်)
Download အခက်အခဲရှိလျှင် http://is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။)Posted 1 month,2weeks agoView this post on Facebook တြိစက္ခ မြနန်းရှင်ဒေ၀ီ
By YePosted 1 month,2weeks agoView this post on Facebook Online Game, News for world of warcraft, Japan Manga and anime download. MTV Music video, Channel Kpop singer artists. Free Games - Download Full Version Free PC Games. All Free Game Downloads are Trusted and Safe. No Trials. No Payments.
Developed by myanmarjournaldownload.com . MySQL: 0.0028 s,0request(s), PHP: 0.0976 s, total: 0.1004 s, document retrieved from cache.